तपाईको आज : २०७६ फागुन २७ गतेको राशिफल – Sagarmatha Online News Portal
तपाईको आज : २०७६ फागुन २७ गतेको राशिफल
आज वि.सं. २०७६ फागुन २७ गते मंगलबार । इ.स. २०२० मार्च १० तारिख । ने.सं. ११४० चिल्लागा । चैत्र कृष्णपक्ष । प्रतिपदा, २१ः३२ उप्रान्त द्वितीया ।
उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य) ।
मेष : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ : पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ । चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ । विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै पछि पार्न सकिनेछ । भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ । शत्रुहरू पनि किनारा लाग्नेछन् । बृष : इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो : शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन् । पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ । सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ । सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ । आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा पनि अरूलाई उछिन्न सकिनेछ । मिथुन : का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह : अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ । टाढिएका सन्तानलाई आमाको यादले सताउन सक्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावले फाइदा दिलाउनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउलान् । आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। मिहिनेतले जटिल ठानिएको काम पनि बन्नेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ ।
कर्कट : हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो : भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुनेछ । हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ । पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । व्यवसायमा राम्रै लाभ हुनेछ भने चिताएको काममा सफलता पाइनेछ । मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ । पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ । प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सफल भइनेछ । प्रयत्न गर्दा दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ । सिंह : मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे : आवेशको निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ । बोली–व्यहारमा संयम रहँदै गरिएको युक्तिपूर्ण व्यवहारले भने फाइदा दिलाउनेछ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ भने बुद्धिको माध्यमले लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ । मिहिनेत गर्दा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आयस्रोत अलि कमजोर हुनाले नयाँ काम सुरुवात गर्न समय लाग्नेछ । कन्या : टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो : रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ । बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट होला । कामको सफलताले हौसला जगाउनेछ । अरूका कमजोरीबाट फाइदा उठाउने समय छ । विभिन्न अवसरले पछ्याए पनि विवादास्पद निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ । तर्क र कूटनीतिले अवसर दिलाए पनि आत्मसम्मान जोगाउन सजग रहनुपर्ला ।
तुला : र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते : खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ । फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ । सोचेको नतिजा तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ । तापनि पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । बसाइको स्थानान्तरण वा टाढाको यात्रा सम्भावना छ । बृश्चिक : तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु : व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । सञ्चित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ । तर केही काम रोकिनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि आंशिक लाभ हुनेछ । व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । सोखले खर्च बढाउने हुँदा रकम जुटाउन कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ । धनु : ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे : प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ । विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ । सामाजिक नेतृत्व हातलागी हुन सक्छ। व्यापारमा पनि फाइदै हुनेछ । कूटनीतिक व्यक्तिको सहयोग जुट्नेछ । नोकरी तथा राजनीति गर्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुनेछ । मकर : भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि : मेहनत परे पनि भाग्यले राम्रै अवसर दिलाउनेछ । चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसर तथा सफलताले पछ्याउनेछन् । टाढिएका मित्रगण नजिकिनाले प्रसन्नता मिल्नेछ । सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ । आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ । अभाव हट्नुका साथै दाम, नाम र इनाम प्राप्त हुनेछ । धार्मिक अनुष्ठान र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ ।
कुम्भ : गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द : आकस्मिक समस्याले शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । न्यून उपलब्धिका लागि धेरै समय खर्च हुनेछ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् । गोपनीयतामा अलि ध्यान पुर्याउनुहोला । काम पूर्ण नभए पनि पछिका लागि सकारात्मक संकेत प्राप्त हुनेछ । बिग्रिएको काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला । मीन : दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि : परिस्थिति अनुकूल रहनेछ भने लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । विशेष उपहार प्राप्त हुन सक्छ । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने समय छ । व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ ।